सोधिने प्रश्न -। SJZ JINXUAN कारोबार कं, लि।
तपाईंको मूल्यहरु के हुन्?
हाम्रो मूल्यहरु आपूर्ति र अन्य बजार कारक आधारमा परिवर्तन गर्न विषय हो। तपाईं आफ्नो कम्पनी पछि अद्यावधिक मूल्य सूची पठाउने थप जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाईं न्यूनतम आदेश मात्रा छ?
हो, हामी निरन्तर न्यूनतम आदेश मात्रा छ सबै अन्तर्राष्ट्रिय आदेश चाहिन्छ। तपाईं resell तर धेरै सानो परिमाणमा देख रहे भने, हामी तपाईंलाई हाम्रो वेबसाइट जाँच सिफारिस
तपाईं सान्दर्भिक कागजात आपूर्ति गर्न सक्छन्?
हो, हामी विश्लेषण / conformance को प्रमाणपत्रहरू सहित सबैभन्दा दस्तावेज प्रदान गर्न सक्छन्; बीमा; मूल र अन्य निर्यात कागजातहरू जहाँ आवश्यक छ।
नमूनाहरू लागि, नेतृत्व समय7दिन छ। ठूलो उत्पादन लागि, नेतृत्व समय 20-30 दिन निक्षेप भुक्तानी प्राप्त पछि हो। (1) हामी आफ्नो जम्मा प्राप्त गरेका गर्दा नेतृत्व पटक प्रभावकारी बन्न, र (2) हामी आफ्नो उत्पादनहरु को लागि आफ्नो अन्तिम स्वीकृति छ। यदि हाम्रो नेतृत्व पटक आफ्नो म्याद काम छैन, आवश्यकताहरु आफ्नो आफ्नो बिक्री संग भन्दा जाने गर्नुहोस्। सबै अवस्थामा हामी आफ्नो आवश्यकता समायोजित गर्न प्रयास गर्नेछ। प्रायजसो हामी त्यसो गर्न सक्षम छन्।
तपाईं भुक्तानी विधिहरू कुन प्रकार स्वीकार गर्छन्?
: तपाईं हाम्रो बैंक खाता, वेस्टर्न युनियन वा PayPal गर्न भुक्तानी गर्न सक्छन्
अग्रिम 30% जम्मा, बी / एल को प्रतिलिपि विरुद्ध 70% रकम।
उत्पादन ग्यारेन्टी के छ?
हामी ग्यारेन्टी हाम्रो सामाग्री र कारीगरी। हाम्रो प्रतिबद्धता हाम्रो उत्पादनहरु आफ्नो सन्तुष्टि छ। ग्यारेन्टी वा छैन, यो ठेगाना र सबैको सन्तुष्टि सबै ग्राहक मुद्दाहरू समाधान गर्न हाम्रो कम्पनी को संस्कृति छ
तपाईं उत्पादनहरु सुरक्षित र सुरक्षित वितरण ग्यारेन्टी गर्छन्?
हो, हामी उच्च गुणवत्ता निर्यात प्याकेजिङ्ग सधैं प्रयोग गर्नुहोस्। हामी पनि खतरनाक सामान लागि विशेष जोखिम पैकिंग र तापमान संवेदनशील वस्तुहरूको लागि मान्य शीतभण्डार shippers प्रयोग गर्नुहोस्। विशेषज्ञ प्याकेजिङ्ग र गैर-मानक पैकिंग आवश्यकताहरु एक अतिरिक्त शुल्क लाग्न सक्छ।
कसरी ढुवानी शुल्क बारेमा?
ढुवानी लागत तपाईं सामान प्राप्त गर्न छान्ने तरिका मा निर्भर गर्दछ। एक्सप्रेस सामान्यतया सबैभन्दा तेज तर पनि सबै भन्दा महंगा तरिका हो। seafreight द्वारा ठूलो रकम लागि सबै भन्दा राम्रो उपाय हो। ठ्याक्कै माल दर हामी मात्र हामी राशि, वजन र बाटो विवरण थाहा यदि तपाईं दिन सक्छन्। थप जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
2019 ambiente फ्रैंकफर्ट बुथ गर्मी प्रतिरोध ...
Borosilicate ग्लास खाद्य कन्टेनर , Double Walled Tea Glass, Borosilicate ग्लास पट, Borosilicate ग्लास खाद्य कन्टेनर , Borosilicate ग्लास Casserole , Borosilicate ग्लास Bakeware ,